नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित,यति धेरैको मृ-त्यु, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए? |
नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित,यति धेरैको मृ-त्यु, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए?
August 21, 2021 adminLeaveaComment on नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित,यति धेरैको मृ-त्यु, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए?
भदाै ५ गते।नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, यति धेरैको मृ-त्यु, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? केही दिनयताको तथ्यांक हेर्दा को-रोना संक्रमितबाट मृ- त्यु हुनेको संख्या पनि बढेको देखिएको छ ।पछिल्लो २४ घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्याभन्दा निको हुनेको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । थप २ हजार ७५ जनामा को- रोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा यही अवधिमा थप २ हजार ३८२ जना जना निको भएका हुन् । कूल १३ हजार ७५ जनाको को-रोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट १ हजार ४२४ र एन्टीजेन विधिबाट ६५१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३९ हजार ३२१ रहेको छ । थप २ हजार ३८२ जना निको हुँदा नेपालमा हाल कूल सङ्क्रमितमध्ये ६ लाख ९५ हजार ९२५ जना सङ्क्रमणमुक्त भइसकेका छन् । नेपालमा निको हुने दर ९३.३ प्रतिशत रहेको छ ।यही अवधिमा थप ३० जनाको मृ-त्यु भएको छ । नेपालमा हालसम्म १० हजार ४८५ जनाले को- भिड–१९ को सङ्क्रमणबाट ज्या-न गुमाइसकेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी काठमाण्डू जिल्लामा ४८३ सङ्क्रमित भेटिएका हुन् ।
नेपालभरि २२ जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने थप १७ जिल्लामा २०० देखि ४९९ सक्रिय सङ्क्रमित रहेका मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।काेराेना भा-ईरस(काे-भिड–१९) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश।हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
एकछिन समय निकालेर पढ्नुहोला।कृपया बेवास्ता नगर्नुहोला।
भर्खर सार्वजनिक भयो १२ कक्षाका बिद्यार्थीका लागी नया खबर। परिक्षाबारे यो जानकारी नाछुटाउनु होला।
शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउने बित्तिकै पाइन्छ २५ लाख ऋण,यस्तो छ प्रक्रिया